Nhoroondo yeKambani - BXL Yakagadzira Packaging
Yakavambwa muna1999, BXL Creative inotarisa pakurongedza dhizaini uye yekugadzira hunyanzvi hwepamusoro-magumo emhando yepamusoro inovhara maindasitiri akasiyana siyana senge runako, pefiyumu, makenduru anonhuwirira, kunhuwirira kwepamba, waini & midzimu, zvishongo, chikafu chemhando yepamusoro, nezvimwe.
HQ muShenzhen, padyo chaipo neHK, inovhara nzvimbo inopfuura 8,000 ㎡ uye nevashandi vanopfuura mazana maviri nemakumi masere, kusanganisira 9 makirabhu ezvikwata (vanopfuura makumi mashanu vagadziri).
Main fekitori, ine nharaunda inopfuura 37,000㎡, iri muHuizhou, 1.5 awa kutyaira kubva kuQ uye nevashandi vanopfuura mazana matatu.
Kushambadzira (kuvaka chiratidzo kubva ku0)
Kavha dhizaini (graphic & dhizaini dhizaini)
Kugadzira & Kuronga
International logistics & nekukurumidza kutendeuka chirongwa
Gadzira kukosha kwevashandi
Gadzira kukosha kwevatengi
Ipa kukosha kunzanga
Vatengi veBXL Creative vanofukidza North America, Europe, Southeast Asia, Middle East neAustralia, nezvimwe zvakaongororwa mutengesi anokwanisa ezvigadzirwa zvakaita seGUCCI, BVLGARI, LVMH, DIAGEO, L'OREAL, DISNEY, zvichingodaro. Panguva imwecheteyo, BXL Creative inotsigirawo mamwe mazana maviri+ epakati nepadiki zvigadzirwa zvepasirese pane avo mapakeji zvinodiwa uye zvinangwa zvekukura pamwechete nevatengi.